Nitory Tany Amin’ny Faritra Farany Atsimon’i Eoropa | Taratasy-Gresy
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Grika Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Norvezianina Ossète Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinoa (Shanghaï) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa
Taratasy avy any Gresy
NIAINGA teto amin’ny nosy Kreta izahay mba hitory any amin’ny Nosy Gavdos. Havoana kely iray any afovoan’i Mediterane, any amin’ny faritra farany atsimon’i Eoropa, izy io. Toy ny teboka kely fotsiny no fijery azy eo amin’ny sarintany. Nisy 13 izahay no nandeha. Niha tsy tazana tsikelikely ny Tendrombohitra Levká, teto Kreta, rehefa nandeha ny sambo nitondra anay.
Nafana ny andro tamin’izay, ka tokony ho nisosa tsara ny dianay. Nifofofofo be tampoka anefa ny rivotra, ka nihetsika be ny ranomasina ary natopatopany toy ny bosoa ny sambonay. Lasa naloiloy be aho. Tsaroako ny apostoly Paoly tamin’izy tratran’ny tafio-drivotra teny amin’io rano io, taonjato maro lasa izay. Kaoda no niantsoana ny Nosy Gavdos tamin’izany. (Asan’ny Apostoly 27:13-17) Hoy aho hoe enga anie ka ho tody soa aman-tsara izahay.
Tanjona Trypití, any amin’ny farany atsimon’ny tendron’i Eoropa
Tazanay ihany tamin’ny farany ny Nosy Gavdos. Hantsam-bato no eny amin’ny sisiny. Somary mari-tampona izy io ary 300 metatra eo ho eo monja ny haavony. Tokotokony ho 26 kilaometatra toradroa ny velaran’ilay nosy. Saika rakotry ny alan-kesika sy kirihitrala izy io. Feno hazo zenevrie maniry koa hatreny amoron-dranomasina, any amin’ny faritra sasany.
Nisy 8 000 teo ho eo ny mponina tany Gavdos, taloha. Tsy ampy 40 akory anefa izao ny olona tena mipetraka any. Tsy mbola mivoatra mihitsy koa ilay toerana. Misy sambo mpitondra entana na solika ihany mandalo any matetika. Mahalana anefa vao misy sambo mpitondra olona, mampifandray an’i Kreta sy Gavdos. Indraindray aza ahemotra na foanana ny fandehanan’ilay sambo satria ratsy ny andro.
Hilaza vaovao tsara avy ao amin’ny Baiboly amin’ny olona no anton-dianay tany Gavdos. Hampahafantatra azy ireo izahay hoe ho tsara kokoa ny fiainana amin’ny hoavy, ary hiaina mandrakizay sy ho salama tsara foana ny olona. Tsy andrinay erỳ àry izay nialana tao amin’ilay sambo rehefa tonga teo amin’ny seranana izahay.
Adiny efatra sy sasany teo ho eo izahay no natopatopan’ny onja, ka hita tamin’ny endrikay fa tena nandreraka ilay dia. Rehefa avy natory kely sy nisotro kafe anefa izahay dia velombelona indray. Nandinika vetivety momba ny dia nataon’i Paoly aloha izahay ary nivavaka dia avy eo lasa nitory amin’izay.
Sariaka sady tia mandray vahiny ny mponina any. Nampandrosoin’izy ireo izahay ary nomeny ody ambavafo kely. Nankasitrahanay ny nataon’izy ireo ka tsy nitory fotsiny izahay fa nanampy koa. Nitory tamin’ny vehivavy iray, ohatra, ny mpitory namanay, izay elektrisianina. Tsikariny fa nisy zavatra simba tao an-tsenan’ilay vehivavy dia namboariny. Nanohina ny fon’ilay vehivavy izany ka nandray boky izy ary nidera anay sy ny fitoriana nataonay. Nisy vehivavy hafa koa nilaza hoe: “Andriamanitra no naniraka anareo fa tsy olona matoa tonga mitory atỳ amin’ity nosy lavitra be ity ianareo.”
Tena tian’ny olona ny boky sy gazety nentinay. Nisy lehilahy iray, ohatra, nandray gazety Tilikambo Fiambenana sy Mifohaza! Mbola nangataka boky hafa anefa izy mba hovakiny mandritra ny ririnina. Nisy lehilahy hafa koa nangataka boky ho azy. Mbola nangataka hafa koa anefa izy hapetrany ao an-tsenany mba hovakin’ny mpividy. Nomeny anay ny adiresiny mba hahafahanay mandefa gazety ho azy isam-bolana. Gaga be koa ny fianakaviana iray rehefa naseho azy fa ao amin’ny Baiboly ilay nosikely misy azy ireo. Nandray gazety koa izy ireo.
Helodranomasin’i Sarakíniko, trano nisy an’ireo natao sesitany, ary takelaka ho fahatsiarovana azy ireo
Tena nampahery ny fitoriana tany Gavdos. Nampitamberina fahatsiarovana ratsy ho an’ny sasany taminay koa anefa ny tany. Hitanay tany mantsy ny trano nanaovana sesitany an’i Emmanuel Lionoudakis. * Niaraka taminay tany ny zanany vavy sy ny vinantolahiny ary ny zafikeliny, ka nalahelo be rehefa nahita an’ilay toerana. Any akaikin’ny Helodranon’i Sarakíniko no misy azy io ary gadra politika no tao taloha. Vavolombelon’i Jehovah anefa i Lionoudakis ary noho izy nitory no nanagadrana azy, taloha kelin’ny 1940. Nanjono izy mba hatao sakafo. Nazoto nitory tamin’ny gadra hafa koa izy na dia izy irery aza no Vavolombelona tany. “Tany ngazana tsy nisy afa-tsy maingoka” no nahalalana an’i Gavdos tamin’izany, ka be dia be no “maty tany satria mosarena sy narary ary tsy nanana izay tena nilaina. Izany no niantsoana azy io hoe nosin’ny fahafatesana.” Mandrisika anay tsy hivadika sy hazoto hitory ny ohatra navelan’i Lionoudakis.
Tsy toerana mahafinaritra fitsangantsanganana mihitsy any Gavdos ho an’izay natao sesitany tany. Tena tianay anefa ny nitory tany, tamin’iny faran’ny herinandro iny. Nahapetraka gazety 46 sy bokikely 9 izahay. Tsy andrinay indray izay hihaonana amin’ireny namana vaovao ireny.
Tsy hitahita akory dia tonga ny fotoana hodiana. Tamin’ny dimy hariva izahay no tokony ho niainga nefa ratsy indray ny andro, ka nahemotra izany. Tonga ihany ny fotoana hiaingana. Nankao anaty sambo izahay tamin’ny misasakalina mba hiomana handeha. Tamin’ny telo maraina izahay vao tafainga, ary tonga soa tany Kreta rehefa avy natopatopan’ny ranomasina nandritra ny adiny dimy. Reraka be izahay ka nivembena rehefa niala avy tao anaty sambo. Faly anefa izahay nampahafantatra ny anaran’i Jehovah tany Gavdos. (Isaia 42:12) Samy niaiky izahay fa tsy matiantoka nankany. Vetivety dia hohadinoinay iny dia namizana be iny, fa raha ny zavatra nahafinaritra kosa tsy ho afaka ao an-tsainay mihitsy.
^ feh. 11 Ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Septambra 1999, pejy 25-29, ny tantaran’i Emmanuel Lionoudakis.
Hizara Hizara Nitory Tany Amin’ny Faritra Farany Atsimon’i Eoropa
w12 1/9 p. 24-25